पलपल मर्दै जानुको पीडा
रूपमा कम्युनिष्ट, सारमा सामन्ती हुन् । जीवनका ऊर्जाशील १५ वर्ष माओवादीमा बिताएर निकालेको निष्कर्ष हो यो मेरो । जब–जब १ फागुन आउँछ, माओवादीले त्यसलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै गर्दा मन भत्भती पोल्छ । जनयुद्ध दिवस मनाउने नाममा करोडांै खर्चने माओवादी नेतृत्वले हिजो लडाउँदा, भिडाउँदा, घाइते, अंगभंग भएका लडाकु र सिन्दुर पुछिएका चेली कहाँ, के गर्दै छन् भनेर बिर्सेको देख्दा हामीलाई सत्तामा पुग्न तिनका भ¥याङ मात्र… विस्तृत समाचार
किन बाहिर आउनु यस्तो कुरा ?
राजनीति मात्र होइन साली, गर्लफ्रेण्ड र आफन्त च्याप्दा नेपालको खेल क्षेत्रमा समेत प्रतिदिन धमिरा लाग्दै गएको छ । गणेश थापा हुँदै युवराज लामाहरूको चक्रव्युहमा परेको खेल क्षेत्र प्रतिदिन भासिँदै रसातलमा पुग्यो । यहीभित्र देखिएका विकृति–विसंगतिविरुद्ध सत्य आवाज ओकल्दा ठालुहरूबाट अन्यायपूर्वक गलहत्याइएको एउटा पात्र हुँ । राष्ट्रिय स्तरका सातवटा पदक हात पार्दासमेत मलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा समावेश गराइएन । बरु त्यहाँका टाउकेको गर्लफ्रेण्ड, साली च्यापेर विदेश पुगे… विस्तृत समाचार
कहिले आउला चोकमा भेटिने दिन ?
एउटा मान्छेसँगको भेटले कति फरक पार्दो रहेछ जिन्दगीमा ! राति निदाउन निकै गाह्रो भयो । बिछ्यौनामा पल्टेको दुई तीन घण्टा बढी भइसक्यो मरिगए, निद्रा लागेको छैन । जति कोसिस गरे पनि मरिगए निद्रा लाग्दैन । तर, आँखा चिम्लिएर लामो–लामो सास फेर्दै घरी यता घरी उता कोल्टो परेर सुतेका छन्, उनी । चारैतिर चकमन्न छ । जुनकिरीको ‘किर–किर’आवाज मात्रै । यदाकदा कुुकुर भुकिरहेको सुनिन्छ । सुनसान… विस्तृत समाचार
मन त पग्लियो, तर जिन्दगी त्यतै अड्कियो
सुनमा जन्मिएँ, हीरामा हुर्किएँ– यस्तै थियो मेरो बाल्यकाल । समय र परिस्थितिले यसरी फन्को मा¥यो कि आज म काँडैकाँडाबीच जीवन जिउने अभ्यास गर्दै छु । अभ्यस्त भइसकेको छु । बाल्यकालमा दुःख÷अभाव के हो ? त्यसको कुनै अनुभवसमेत रहेन । बुबा उद्यमी, आमा सरकारी जागिरे । धेरैलाई लाग्दो हो उद्यमी परिवारभित्र जन्मेर हुर्कनेहरू सुख सयल र मोजमस्तीको जीवन बिताउँछन् तर यसैमध्यको एउटा ‘अपवाद’ हुँ । बुबा… विस्तृत समाचार
बिग्रेका कम्युनिष्टबाट गरिब बर्बाद
रूपमा कम्युनिष्ट, सारमा सामन्ती रहेछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट रिटायर्ड बुद्धिजीवी, कानुनी क्षेत्रका ज्ञाता, माले पार्टीका पोलिब्युरो सदस्य यिनै भूपू मन्त्रीको सामन्ती व्यवहारबाट म घर न घाटको भएँ । जीवनका ऊर्जाशील समय खाडी मुलुकमा पुगेर कमाएको सम्पत्तिमा गिद्धे नजर लगाए र श्रीसम्पत्ति उडाइदिए । साना दुई लालाबालाको बिचल्ली बनाइदिए, आँशु र श्राप लाग्नेछ जीवनभर मेरा सन्तानको पूर्वमन्त्री खगेन्द्र प्रसार्इंलाई । म दुर्गा परियार, लमजुङ, बेशीशहरमा जन्मेको… विस्तृत समाचार
अहिले यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाए उहिल्यै अर्कैसँग माया–प्रेम गाँस्थें । यस्तो अवस्था सिर्जना हँुदैनथ्यो । उनी यति राम्री थिइन् कि वर्णन गर्न कुनै त्यस्तो शब्द छैन । एक घण्टा मात्र पनि टाढा हुनुपर्दा एक जुग नभेटेजस्तो हुन्थ्यो । सायद आज यस्तो व्यहोर्न रहेछ । रोएर केही पनि नहुने । अहिले सुजाताको नाम सुन्न चाहन्नँ । त्यतिखेर गाउँमा केटाकेटीले मायाप्रेम गाँस्ने हुरी नै आएको थियो… विस्तृत समाचार
गल्ती र गाउँगाउँका कुर्कुरे वैंश
बाँच्नुमात्रै पर्छ यी आँखाले जे पनि देखिन्छ भन्थे । मैले पनि देखँे । कसैलाई माया गर्न फुर्र्सद त के मायाको अर्थ थाहा छैन ! तर कसैलाई भने मायाका नाममा अनेक जात्रा देखाउनुपर्र्ने– कस्तो विचित्र संसार रहेछ यो ? धनी भएर के पो हुँदो रहेछ र मायामा गरिब भएपछि । शरीर एकातिर भए पनि मन अर्कैतिर भएपछि ! हो, उनीहरूको पनि शरीर एकातिर मन अर्कैतिर रह्यो… विस्तृत समाचार
अचम्म भएन त राजधानीमा ?
‘हात्तीको जस्तो देखाउने एउटा र चपाउने दाँत अर्कै ।’ उनको पछिल्लो गतिविधि र व्यवहार हेर्दा यस्तै लाग्छ । समाजसेवाको खोल ओढेर उनले चलाइरहेको धन्दा के हो ? वीर अस्पताल हाताभित्र रहँदा जे भोगेँ, जे देखेँ लेख्दै छु, समाजसेवी दीक्षा चापागाईंकोबारेमा । पवित्रा लामा मोक्तान, घर काभ्रे । रहरै रहरमा रेडियोमा बोल्न थालेको ३ वर्ष पूरा भइसकेछ । धुलिखेलमा रहेको ग्रेस एफएममा कार्यक्रम चलाउँदा भेटिए आदरणीय… विस्तृत समाचार